Dhammaan waa xaqiiqda ku saabsan YouTube Logo
> Resource > YouTube > Xaqiiqada ah YouTube Logo
YouTube logo waa mid aad loo jecel yahay ee internet-ka maanta oo ka mid ah logos in ay yihiin kuwo aad caan ugu ah dadka isticmaala internet-ka waa. Logo Tani noqday image ee baahinta video kaas oo hubiya in users la kulmi doonaan waayo-aragnimo ugu qanco online in in la wadaago, uploading iyo daawashada malaayiin videos.
Logo ee YouTube waxa loo qaybin karaa 2 muuqaalada iyo hal ugu horeysay kasoo muuqday erayga "Adiga" daabacay madow halka "tube" ayaa lagu laftarkeeda waxa ku laydi cas oo kala kii hore. Boodhadhka ay sitaan YouTube waa "baahin naftaada" oo aad ka arki kartaa hoos laba muuqaalada logo ah. Isticmaalka midabada la arki karo sida madow, guduud iyo caddaan muujinaysaa racfaan caanka ah ee shirkadda laftiisa.
Qeybta 1: taariikhda Horumarinta ee Logo YouTube
Qeybta 2: YouTube Yoodles
Qeybta 1: taariikhda Horumarinta ee YouTube Logo
YouTube logo uusan waxba iska badalin badan inta lagu jiro sannado ah, kaliya hagaajin yar ee midabka ama qoraalka. Aan aragno faahfaahinta hoose.
1. 2005-2011 Dhab ahaantii, logo taas waxaa loo qorsheeyay in la bilaabay sanadkii 2003, laakiin habka daahfurka dib ayaa loo dhigay ilaa 2005. image hore ee logo ciyaaray erayga "Adiga" ee madow leh midab image cas fekrado qaab Erayga "Tube" gundhig u ah oo ku saabsan . Image waxa loo adeegsaday sida logo sare tan iyo sanadkii 2011.
1.1 2005-2009 Logo The kale loo isticmaalo inta lagu jiro ugu horeysay ee periodwas logo ku-dhigyo ay "baahin naftaada" iyo waxa loo adeegsan jiray ka bilaabo sannadda 2005 ilaa 2009.
Bishii July 2011, qorshaha beddelid u logo ah la soo bandhigay oo ay ahayd qayb ka mid ah tijaabo ee hagto Eygan. Natiijadan ayaa ka jeestay in ay noqon logo cusub ee YouTube dhowr bilood ka dib markii hordhaca ah ee qorshaha yiri. Qaabka cusub ee la soo bandhigay ee la soo dhaafay December 6, 2012 oo hal-"warbaahinta naftaada la saaro waqtigan.
Tanu hadda waa logo dhawaan ay isticmaalaan YouTube. Dib Jidka bishii December 2013, muujinta ah qaab cas oo qaabeeya beddelmay ka madow si cas oo wax yar ka midabkeedu khafiif.
Sida Google iyo Doodles ay, YouTube sidoo kale ay logo default ku beddeleen mid ka mid ah horyalka Talyaaniga kaas oo la xiriira taariikh gaar ah maalmo kala duwan sanad gudihii. Kuwani logos gaar ah waa waxa loogu yeero YouTube Yoodles. Kuwani waa logos in YouTube isticmaali maalin gaar ah sida ay ka qayb dhacdo kasta oo gaar ah sida tusaale ahaan.
Waxaa jira dhowr YouTube Yoodles in loo isticmaalay in ay ku baahiyaan YouTube Play. Dhab ahaantii, YouTube isticmaalaa logo gaar ah inta lagu guda jiro Maalinta April Nacasyadu ', maalinta Prince William iyo Kate Middleton guursaday oo goobta loo isticmaalo logo gaar ah in calaamad in la joogo aad u gaarka ah.
YouTube Yoodles soo midabo kala duwan iyo naqshado. Logos Kuwani waa mid aad u farshaxanka iyo hal-abuur ay dhan lagu horumariyo. Logos Kuwaas oo indhaha u isticmaala internet-ka qabtaan waqti ka waqti oo iyaga ka dhigaa inay waaniyey oo ku saabsan dhacdooyinka gaarka ah in sawiradaan astaan. Waxaad filan kartaa in ka cusub YouTube Yoodles in sannadkan la joogo. By eegaya Yoodles hore kasoo muuqday internetka ee sano ee la soo dhaafay, hubaal waad filan kartaa in YouTube la iman doonaa Yoodles dheeraad ah in uu noqon doono in ka badan horyalka Talyaaniga iyo qabow.
Waa kuwan tusaalooyin ka mid ah YouTube Yoodles: